एकलकेयर बचत बार्टेल ड्रग्समा उपलब्ध छ - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
समाचार, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा मनोरञ्जन खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा औषधि बनाम मित्र औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी कल्याण समुदाय कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य समुदाय, कम्पनी कम्पनी, समाचार
मुख्य >> कम्पनी >> एकलकेयर बचत अब बार्तेल ड्रग्समा उपलब्ध छन्
एकलकेयर बचत अब बार्तेल ड्रग्समा उपलब्ध छन्
वाशि Washington्टन राज्य मूल निवासीहरु लाई थाहा छ: जब तपाईं आफ्नो नुस्खा को लागी स्थानीय किन्न चाहानुहुन्छ, तपाईं बार्टेल ड्रग्स जानुहुन्छ। १ 130० बर्ष र गणनाको लागि यस स्थानीय स्वामित्वमा रहेको सियाटल-आधारित स्टोरले प्रशान्त उत्तरपश्चिमा समुदायहरूलाई सेवा दिइरहेको छ र यस क्षेत्रका अन्य साना व्यवसायका ,000,००० भन्दा बढी उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्दै।
levofloxacin 50५० मिलीग्राम को लागी प्रयोग गरीन्छ
यो सबै सुरु भयो जब जर्ज एच। बर्टेल सीनियरले सिएटलको सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्टमा एउटा सानो फार्मेसी किन्नुभयो। श्रृंखला पछि stores 67 स्टोर र फार्मेसी स्थानहरूमा बढेको छ। अब, एकलकेयरको साथ नयाँ साझेदारीको लागि धन्यवाद, तपाईं केवल उत्तम सेवा मात्र प्राप्त गर्नुहुने छैन-तपाईं तिनीहरूलाई उत्तम मूल्यमा पाउनुहुनेछ। जब तपाईं बार्टेल ड्रग्समा तपाईंको Rx भर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो औषधिहरूमा %०% बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंले कहिले प्रयोग गर्नुभएको छैन भने प्रिस्क्रिप्शन छुट कार्ड यहाँ मूल कुरा छन्। तपाईं फार्मेसीमा जानु भन्दा पहिले यी तीन सरल चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
कसरी तपाइँको रक्तचाप छिटो कम गर्न को लागी
फिल्टरहरूलाई तपाईंको डोज र मात्रामा समायोजित गर्नुहोस्।
बार्टेल ड्रग्स कूपन खोज्नुहोस्।
तपाईं बर्टेल ड्रग्स फार्मेसीमा प्रयोगको लागि कूपनलाई पाठ पठाउन, प्रिन्ट गर्न वा ईमेल गर्न सक्नुहुनेछ — वा यहाँ सम्म कि सिंगलकेयर अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। App Store वा मा गुगल प्ले । त्यसो भए, यसलाई तपाईंको फार्मासिस्टलाई देखाउनुहोस् जब तपाईं आफ्नो प्रिस्क्रिप्सन लिनुहुन्छ। यसको प्रयोग गर्नको लागि कुनै लागत छैन, केवल बचत।
तपाईंको पहिलो योग्य भरणबाट अतिरिक्त $ $ बचत गर्नुहोस्, र त्यसपछि। १ कमाउनुहुनेछ बोनस बचत भविष्यमा सबै योग्य भरणाहरूको सल्लाहहरूमा। कुनै क्याच छैन - केवल कम मूल्यहरू!
कैन्डिडा अतिवृद्धि को लागी काउन्टर उपचार मा
ग्लिपिजाइडले रगतमा चिनीको मात्रा कति कम गर्छ?
20mg vyvanse को कति लामो हुन्छ
के स्याउ साइडर सिरका तपाइँको लागी राम्रो छ?
10 mg vyvanse कति लामो हुन्छ?
मँ नि: शुल्क फ्लू शट कहाँ पाउन सक्छु?